पैसा बाँडेको आरोपमा जनताले घेरेपछि काँग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले के भने ? - Dainik Nepal
पैसा बाँडेको आरोपमा जनताले घेरेपछि काँग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले के भने ?
दैनिक नेपाल २०७४ मंसिर २० गते २०:२८
काठमाडौं, २० मंसिर । काठमाडौँको धापासीमा सुकुम्बासीलाई पैसा बुझाएको आरोपमा टोखा नगरपालिकाका वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय बासिन्दाले घेरेपछि काँग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले मुख खोलेका छन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नं ५ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार महतले आफूमाथि एमाले कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेको बताएका छन् । टोखा नगरपालिका वडा न‌ं ७ का वडाध्यक्ष नरोत्तम राना मगरको नेतृत्वमा आएका करिब ७०-७५ जनाको टोलीले आफूमाथि एक्कासी दुर्व्यवहार गरेको महतले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अघिल्लो दिन बुधबार साँझ भएको यो घटना भएको हो । बुधबार साँझ ६ बजेतिर काठमाडौँको धापासीस्थित सुकुम्बासी टोलमा पैसा बाँडेको सूचना आएपछि वडाअध्यक्ष मगरको नेतृत्वमा स्थानीय बासिन्दा र एमाले कार्यकर्ता सुकुम्बासी बस्ती पुगेका थिए । तर, महत त्यहाँबाट हिँडेपछि डा. महत बसुन्धरास्थित विजी मार्टको माथिल्लो तल्लामा रहेको स्थानीय काँग्रेस कार्यकर्ता श्री सापकोटाको कार्यालयमा गएर बसेका थिए । एमाले कार्यकर्ताले उनलाई घेराबन्दी गर्दै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसलगत्तै सशस्त्र र जनपद प्रहरीको टोली बसुन्धरा आइपुगेको थियो ।
एमाले कार्यकर्ताहरुले डा. महत र सँगै रहेका नुवाकोटका पूर्वसांसद् बहादुर लामालाई प्रहरीमा बुझाएका थिए । सुकुम्बासी बस्तीमा पैसा बाँडेको सूचना आएपछि आफूहरु त्यहाँ नपुग्दै डा. महत हिँडेको वडाअध्यक्ष मगरले बताए ।
काँग्रेस नेता प्रकाशशरण महत पक्राउ, धापासीका बासिन्दाले प्रहरीलाई बुझाए (हेर्नुस् भिडियो)